Waa kuma ninka aduunka ugu xooga badan | Niman qurux badan
Alicia tomero | | Ku habboon, Fitness, nololeedka, Waqtiyada firaaqada
Ninka dunida ugu xoogga badan waxa loo kala saari karaa dhawr qaybood. Waxaa jira siyaabo badan oo tartan ah oo lagu tuso qofka aad tahay ninka ugu xooga badan, halkaas oo ay ku yeelan doonaan in ay muujiyaan awooddooda sannadaha oo dhan.
Ma jiraan kaliya tartamada ragga, laakiin sidoo kale waxaa jira qaybta loogu talagalay Haweeneyda ugu xooga badan aduunka, halkaas oo ay 70% ka xifaaltamaan miisaanka ay isticmaalaan ragga. Tartanka ugu weyn waxaa laga helaa ciyaaraha fudud, halkaas oo ay ku yeelan doonaan inay la tartamaan awood-siinta.
1 Waa maxay Powerlifting?
4 Dib u eegis taariikhda
Waa maxay Powerlifting?
IFSA Waxay mas'uul ka tahay abaabulka munaasabadda ciyaaraha fudud. Wuxuu ka tagay Met-Rx 2005 wuxuuna bilaabay inuu ku guuleysto tartamada abaalmarinta. Ninka aduunka ugu xooga badan. Dhacdooyinkeeda waxaan ku arki karnaa kor u qaadista jirridda weyn, foosto, dhagxaanta Atlas. Ama kuwa rarida iyo jiidida walxaha sida talaajadleyda, baabuurta xamuulka, diyaarada, baabuurta, madaxa kor loogu qaado, foostooyin ku foorarsan...
Tijaabada xoogga ayaa la sameeyaa inta u dhaxaysa dhammaan tartamayaasha, halkaas oo ay tahay inay muujiyaan dulqaad wanaagsan iyo xawaare wanaagsan. Sannadkii hore, 2021, Tom Stoltman, Scotsman ka Invergordon, ayaa soo muuqday.
Tartamuhu waxa uu dhashay May 30, 1994, deganna Invergordon, Scotland, waxa uu noqday Ninka aduunka ugu xooga badan June 2021 Ninka ugu xoogan 2019.
Tom waa nin kaas wuxuu ku dhashay cudurka autism, cudur si fudud u curyaamiya is-dhexgalka bulshada iyo is-gaarsiinta. Haddiise uu ku guulaystey waxa uu ku guulaystey, waxaa mahad leh ku celcelintiisa hannaankii iyo tiisa ruuxa ka adkaanta fikirkooda iyo dhaqankooda.
Raac nidaamka caadiga ah ee jimicsi maalinle ah iyo tartanka Taasi waxay ka dhigtay inuu gaadho qiyamka iyo diiwaanada isaga oo uga mahadcelinaya 'awooddiisa sare' sida uu u qeexayo. Adigoo raacaya tillaabooyinkan waxaad garanaysaa taas la kulmi kara caqabad kasta taasina waxay ka dhigaysaa edbintiisa weyn. Haddii aadan raacin waxa lagu tilmaamay, uma aragto inaad karti u leedahay, sidaas darteed waxaan weli u kala saareynaa dadaal weyn oo loogu talagalay dadka waaweyn.
Sus diiwaanka gaarka ah calaamadee xogta qaar sida ku jirta Korantada, oo leh squats oo haysta ilaa 325 kg, dhintay 360 kg iyo kursiga keydka oo leh -220 kg. Tartanka Xoog waxa uu gaadhay tuurista 7,50m foosto, 190kg madbacada shaft, iyo -430kg oo mayd ah oo leh xadhig iyo suudh dhintay.
In imtixaanka tartanka ee jimicsiga Waxa kale oo ay xogta ku dhaaftay 215kg log press press, -286kg Atlas stone wiish, 345kg squats, iyo 420kg deadlift.
Waxaa sidoo kale loo magacaabay ninka ugu xoogga badan adduunka jabiyay rikooro badan. Lagu magacaabay qaybtan ilaa afar jeer ee Russia, had iyo jeer waa la is dhaafiyaa mid kasta oo ka mid ah tartamada.
3 sano ka hor wuxuu ku garaacay horumarkiisa isagoo ku qiimeeyay xogtiisa Buuga Guinness of Records, halkaas oo uu u suurtagashay in uu jiido baabuur 26 tan ah. Waxaa ka mid ah diiwaanadiisa hadda, waa in la ogaadaa in uu awooday in uu kor u qaado garbihiisana diyaarad helicopter ah oo miisaankeedu yahay 1.476 kg. Wuxuu kaloo ku guuleystay inuu dhaqaaqo diyaarad Boeing 737 oo ah 36 tan, halkaas oo uu awooday in uu ka guuro meesha ilaa 25 mitir.
Caqabaddan ayuu sheegay in ay ku dhowdahay in uu dhaqaajiyo diyaaradda, waxa ay u muuqatay mid aan macquul ahayn, balse uu awoodiisa gudaha dib u helay oo uu dhaqaaqo. Ma jiraan caqabado badan oo uu iska caabiyo, waxaana ka mid ah waxqabadkiisa shakhsi ahaaneed, wuxuu aad ugu dheeraaday inuu caddeeyo in yoolkiisa ay sabab u tahay. jimicsi weyn iyo dulqaadasho. Waxa kale oo uu sheegay in ay ku sii adkaanayso in uu wax hindiso Layliyada cusub ee hagaajintan, maadaama awood u leh inuu jiido baabuur xamuul ah waxay u egtahay wax aad u fudud.
Dib u eegis taariikhda
Tom Stoltman wuxuu sameeyay taariikh qaab tartan ah oo horay ugu dhashay ciyaaraha fudud. Taariikh dheer oo tartamo ah, Vikings waxay mar hore hiigsanayeen inay muujiyaan xooggooda iyagoo kor u qaadaya dhagxaanta. Qarniyo ka dib Scotland waxaa lagu qabtay Ciyaaraha Buuraha halkaas oo lagu tijaabiyay in jirridda la qaado. Tani waa meesha dhacdooyinka ugu horreeya ay ku dhasheen oo ay markii dambe u guureen Basque Country.
Ragga xoogga badan ee circus waxa ay sidoo kale xoog iyo adkaysi ku muujiyeen bandhigyo fagaare ah qarniyadii XNUMX-aad iyo horraantii XNUMX-aad. Wax-qabadkiisii ​​ayuu ku dhashay culeeyska casriga ah iyo in maanta ay naga tagtay magacyo ciyaaryahano waaweyn sida Louis Cyr iyo Angus MacAskill.
Tartamada ugu horreeya waxay ka dhasheen fikradda IMG ee California sanadkii 1977. Ciyaartoyda kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa dhisa, kuwa culeyska qaada iyo ciyaaryahanada kubadda cagta, ayaa lagu casuumay, waxaana halkaas laga soo aruuriyay abaalmarino iyo abaalmarino tiro badan. Ilaa maantadan la joogo, tartamo kale oo kala duwan sida kuwa Elbrús Nigmatullin ayaa la sii wadaa, iyagoo isku dayaya meel ka baxsan tartanka rasmiga ah iyo diiwaan gelinta Buuga Guinness ee Diiwaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waa kuma ninka aduunka ugu xooga badan